Ukuhlawuliswa koLuntu / iNkcazo yeRhafu Inkcazelo kunye nokubaluleka
Umrhumo woLuntu ("I-Poll Tax") yinkqubo entsha yentela eyenziwe eScotland ngo-1989 kunye neNgilani naseWales ngo-1990 ngurhulumente we-Conservative olawulayo. Umrhumo woLuntu ubeka endaweni ye "Iireyithi," inkqubo yerhafu apho inani elithile lihlawulwa libhunga lendawo ngokuxhomekeke kwindleko yokuqashisa yendlu - kunye nexabiso lentlawulo ehlawulwa ngabantu bonke abadala, abafumana isiteketiso "I-Tax Poll" njengoko umphumo.
Ixabiso lentlawulo libekwe ngumlawuli wengingqi kwaye bekujoliswe kuyo, njengoko kwakunjalo kwiiRhafu, ukuxhaswa ngamalungiselelo ebhunga ngalinye lendawo yeziseko kunye neenkonzo ezifunekayo kuluntu ngalunye.
Ukuphendula kwiRhafu yePoly
Ierhafu yayingabonakali kakhulu: ngelixa abafundi kunye nabangasebenzi bephela kufuneka bahlawule ipesenti, iintsapho ezinkulu zisebenzisa indlu encinci bebona ukuba iintlawulo zabo zikhuphuke kakhulu, kwaye ke irhafu yatsholwa ngokugcina imali ethe tye kwaye ihambise iindleko ihlwempu. Njengoko iindleko zangempela zerhafu zihluke ngamabhunga - zinokubeka amazinga abo - ezinye iindawo zaphela zihlawula imali enkulu; Amabhunga aphinde asolwa ngokusebenzisa irhafu entsha ukuzama nokufumana imali engakumbi ngokuhlawula ngaphezulu; zombini yabangela ukuba
Kukho ukukhala ngokubanzi phezu kweerhafu kunye namaqela achasayo ayenziwe; abanye baxhasa ukulahla ukuhlawula, kwaye kwezinye iindawo, abaninzi abantu babengenalo.
Ngenye imeko imeko yabuya enobudlova: umkhangeli omkhulu eLondon ngo-1990 waba ngumfesane, kunye nabangama-340 abanjwe kunye nama-polisi angama-45, eyona mingcipheko kunazo zonke eLondon iminyaka engaphezu kwekhulu. Kwakukho nezinye iziphazamiso kwenye indawo kwilizwe.
Iziphumo zeRhafu yePoly
UMargaret Thatcher , uNdunankulu wexesha, wayezizibonele ngokwakhe kwiRhafu yePoly kwaye yazimisela ukuba iya kuhlala.
Wayesekude nomntu owaziwayo, ekhulile ukuxhatshazwa kweMfazwe yaseFalkland , wahlasela imibutho yabasebenzi kunye nezinye iinkalo zaseBrithani ezinxulumene nentsebenzo yabasebenzi, kwaye zatshintshe utshintsho oluvela kwintlalo yokukhiqiza ibe enye yezoshishino zesevisi (kwaye, ukuba izityholo ziyinyani, ukusuka kwiindawo ezixabisekileyo zoluntu kubasebenzisi abandayo. Ukuthukuthela kuye kwaqondiswa kuye kunye noorhulumente wakhe, ukuphazamisa isikhundla sakhe, kwaye anganikeli nje amanye amaqela ithuba lokumhlasela, kodwa asebenza nabo kwiConservative Party.
Ngasekupheleni kwe-1990 wayelwe inselele ngenxa yobunkokeli beqela (kwaye ngoko luhlanga) nguMichael Heseltine; nangona wamnqoba, akazange aphumelele amavoti alaneleyo ukuyeka ujikelezo lwesibini kwaye wasula, wagxothwa yerhafu. Umceli wakhe, uJohn Major, waba nguNdunankulu, washiya uMrhumo woLuntu waza watshintsha indawo kunye neenkqubo ezifana neRhafu, kwakhona ngokusekelwe kwixabiso lezindlu. Wakwazi ukunqoba ukhetho olulandelayo.
Emva kweminyaka engamashumi amabini anesihlanu kamva, iRhafu yePoly isengumthombo womsindo kubantu abaninzi eBrithani, ithatha indawo yayo kwi-bile eyenza uMargaret Thatcher unobangela obuninzi phakathi kweBrithani ekhulwini lama-20. Kufuneka kuthathwe njengephutha elikhulu.
Tony Hawk Pro Skater Ifowuni yegalari
9 I-Best Stop-Motion Animation Iimpawu zeeKhamera
I-Classic Classic Table Tennis Blades
Yintoni eyenza uKrisimesi Ikhetheke ngakumbi?
Yiyiphi i-Skateboarding Yonke
YeMfazwe Yehlabathi II eYurophu: iBlitzkrieg kunye "neMfazwe yePhony"